I-Excel ifumene umxholo ongafundekiyo
Ikhaya iimveliso DataNumen Excel Repair I-Excel ifumene umxholo ongafundekiyo kwi "filename.xslx".
Ulwazi oluneenkcukacha malunga ne "Excel Ifunyenwe Umxholo Ongafundekiyo" Imposiso
Xa uvula ifayile ye-XLSX eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ngeMicrosoft Excel, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:
I-Excel ifumene umxholo ongafundekiyo kwi. Ngaba uyafuna ukubuyisa imixholo yale ncwadi yomsebenzi? Ukuba uyathemba umthombo wale ncwadi yomsebenzi, cofa u-Ewe.
apho igama lefayile.xlsx ligama lefayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ye-Excel.
Ukuba ukhetha "Ewe", i-Excel iya kuzama ukulungisa ifayile ye-Excel eyonakeleyo. Zimbini iimeko, njengasezantsi:
1. I-Excel ayinakulungisa ifayile.
Kwimeko apho, iya kubonisa lo myalezo wemposiso ulandelayo:
I-Excel ayinakuvula ifayile 'igama lefayile.xlsx' kuba ifomathi yefayile okanye ulwandiso lwefayile alusebenzi. Qinisekisa ukuba ifayile ayonakaliswanga kwaye ulwandiso lwefayile luhambelana nefomathi yefayile.
Apha ngezantsi kukho umfanekiso wempazamo womyalezo wemposiso:
2. I-Excel inokulungisa ifayile.
Kwimeko apho, iya kubonisa lo myalezo ulandelayo:
I-Excel ikwazile ukuvula ifayile ngokulungisa okanye ngokususa umxholo ongafundekiyo.
ngemixholo iyalungiswa okanye isuswe kuluhlu olungezantsi komyalezo.
Apha ngezantsi kukho isampulu yemifanekiso yomyalezo:
Emva kokucofa u "Vala" iqhosha, i-Excel iya kuvula ifayile emiselweyo. Zimbini iimeko:
Enye idatha ifunyenwe kwifayile emiselweyo, kodwa idatha eninzi yi-lost emva kwenkqubo yokulungisa / yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Akukho datha yokwenyani ikhona kwifayile esisigxina emva kwenkqubo yokulungisa / yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Xa uvula ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ye-Excel XLS ngeMicrosoft Excel, uya kubona umyalezo wempazamo ofanayo:
Olu xwebhu lonakele kwaye alunakuvulwa. Ukuzama ukuyilungisa, sebenzisa i-Open and Repair command kwibhokisi yencoko yababini evulekileyo, kwaye ukhethe ukuKhipha idatha xa ukhuthazwa.
Ukuba ukhetha "Kulungile", i-Excel iya kuzama ukulungisa ifayile ye-Excel eyonakeleyo kwaye ibonise umyalezo olandelayo:
Iimpazamo zafunyanwa 'kwifayile yegama.xls,' kodwa iMicrosoft Office Excel ikwazile ukuvula ifayile ngokwenza ulungiso oludweliswe ngezantsi. Gcina ifayile ukuze wenze oku kulungiswa ngokusisigxina.
apho igama lefayile.xls yifayile yeXLS eyonakeleyo elungiswa.
Kwaye umphumo wokulungiswa uza kudweliswa ngezantsi komyalezo.
Emva kokucofa iqhosha u "Vala", i-Excel iya kuvula ifayile esisigxina. Nangona kunjalo, idatha eninzi yi-lost emva kwenkqubo yokulungisa / yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Xa ifayile yakho ye-Excel yonakele kwaye ezinye iindawo zingaziwa yi-Excel, i-Excel iya kuthi ixele lo myalezo wempazamo kwaye izame ukuwulungisa. Nangona kunjalo, ngenxa yomda wokubuyisela umda kwi-Excel, emva kwenkqubo yokulungisa / yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, akukho datha yokwenyani iya kufunyanwa okanye idatha eninzi iya kuba lost.
Ungayisebenzisa DataNumen Excel Repair ukubuyisa ifayile ekhohlakeleyo ye-Excel, eya kuthi ifumane idatha eninzi kune-Excel.
Isampulu yeFayile 1:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo4.xlsx
Ngomsebenzi wokulungisa owakhelwe ngaphakathi we-Excel, i-Excel iyasilela ukulungisa ifayile.
kunye DataNumen Excel Repair: 100% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo4_fixed.xls
Isampulu yeFayile 2:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo3_1.xlsx
Ngomsebenzi wokulungisa owakhelweyo kwi-Excel, 0% idatha yeseli inokufunyanwa.
kunye DataNumen Excel Repair: 61% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo3_1_fixed.xls
Isampulu yeFayile 3:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo3_2.xlsx
kunye DataNumen Excel Repair: 36% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo3_2_fixed.xls
Isampulu yeFayile 4:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo3_4.xlsx
kunye DataNumen Excel Repair: 16.7% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo3_4_fixed.xls
Isampulu yeFayile 5:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo3_5.xlsx
kunye DataNumen Excel Repair: 95% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo3_5_fixed.xls
Isampulu yeFayile 6:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo3_7.xlsx
kunye DataNumen Excel Repair: 5% idatha inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo3_7_fixed.xls
Isampulu yeFayile 7:
Ifayile yeXLSX eyonakeleyo: Impazamo2_1.xlsx
Ngomsebenzi wokulungisa owakhelweyo kwi-Excel, 50% idatha yeseli inokufunyanwa.
kunye DataNumen Excel Repair: 89% idatha yeseli inokufunyanwa.
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo2_1_fixed.xls
Isampulu yeFayile 8:
Ifayile yeXLS eyonakeleyo: Impazamo2_2.xls
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo2_2_fixed.xlsx